LR Rakibta Rakaabka Rakibayaasha Sameeyayaasha iyo Sifixiyeyaasha - Warshad Shiineeys ah - Rihoo Industry.
Guriga > Alaabada > La soco Rakaabka Roller > LR Rakabka Rakibayaasha
Waxyaabaha soo socda ayaa ku saabsan LR Rakaabka Rakaabka ee la xidhiidha, waxaan rajeynayaa inaan kaa caawiyo inaad fahamto LR Ragaha Rakaabka Roller.
Rakfansiyo leh cylindrical ama giraangirsan dhejis
Meelaha LR-ka ee Meelaha Rugaha Rakaabka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'CAM ROLLERS', oo loo isticmaalo wadooyinka culus ee culus ama loo isticmaalo sida muraayada qashinka ah si loo daboolo codsiga gaarka ah ee kharajka la yareeyo. Qeybta sare ee wejiga ah ee rikoodhada waxaa loo qaabeeyey dusha sare ee rukunka leh R500 (sonkorta U). Waxay qaadan karaan gaartanka birta (kudheer KDD) ama shaanadda xumbada (NPP) si looga hortago boodhka.
Xayiraadda LR ayaa laga sameeyey santuuqa sare ee tayada leh, noocyada qaar ayaa laga sameyn karaa ka hortagga birta ee birta. Waxa kale oo la geyn karaa rikoodhada ama miisaanka loo yaqaan 'concentric'.
Rihoo Industry waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu wanaagsan ee Rikoorka Rikoorka Rakaabka ah iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha, soo dhaweynaya iibsashada iyo weelka qashinka lagu dhejiyo ee laga sameeyay shiinada laga sameeyay shiinaha laga soo iibsaday.
Hot Tags: LR Rakabadda Rakaabka Rakaabka, Shiinaha, Warshadaha, Milkiilayaasha, Warshadaha, Iibsiga, iibsashada, Takhasuska, tayada sare, sicir-dhimis, qiime jaban, qiime jaban, tusaalayaal lacag la'aan ah, qadarin